Blogger Of The Week: Akar - MeroReport
Blogger Of The Week: Akar
अनिलप्रसाद घिमिरे नेपाली ब्लगसंसारमा आकारको नामले चिनिनुहुन्छ । उहाँले चलाउनुभएको आकारपोस्ट नियमित अपडेट हुने र विभिन्न सन्दर्भलाइ समेट्ने नेपाली ब्लग हो । एलेक्साको रिपोर्टअनुसार यो ब्लग नेपालमा धेरै हेरिने साइटमध्ये २३० नम्वरमा पर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कम्युटर इन्जिनियरका विद्यार्थी रहनुभएका अनिल यो साता मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर हुनुहुन्छ । उहाँको ब्लगिङ अनुभव र नेपालको ब्लगको सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको छः
ब्लगिङ कसरी शुरू भयो?
ब्लग भन्ने थाहा नपाइकनै शुरू भयो । शुरू शुरूमा याहुको 360 मा फोटोहरू पोस्ट गरेर शुरू गरियो । पछि केयू (काठमाडौं विश्वविद्यालय) पढ्न थालेपछि विस्तारै क्लासको नोट र असाइनमेन्टहरू पोस्ट गर्न थालियो । त्यसपछि, आफुले देखेका वा अनुभव गरेका कुरामा लेख्न थालियो । मेरो बढी रूचि प्रविधीसम्वन्धी ब्लग (टेकब्लग) मा छ ।
कस्तो विषयमा ब्लग लेख्नुहुन्छ?
मैले जे अनुभव गर्छु, अथवा जे देख्छु, त्यही लेख्छु । देशविदेशमा भइरहेको राष्ट्रिय महत्वको घटनादेखि स्थानीय स्तरमा भइरहेको कुराहरू मैले ब्लगमा पोस्ट गर्छु । मेरो ब्लग अहिलेसम्म बढी समाचारमूलक कुराहरू छन्, विचारहरू अलिक कम छन् ।
ब्लगिङ गर्दाको सुनाउन मन लागेको अनुभव?
कहिलेकाँही कुनै पोस्टको कमेन्टहरूमा कमेन्ट गर्नेहरूबीचमै झगडा हुन्छ, त्यो देख्दा कहिलेकाँही आत्तिन्छु । कुनै ठूलै घटना हुने की भन्ने डर लाग्छ । त्यस्तै, एनसेलले सगरमाथाको बेसक्याम्पमा थ्रीजी शुरू गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा खासै प्राथमिकतामा समाचार आएन, त्यसको बारेमा ब्लग लेखें ।
ब्लग आर्थिक रूपमा कसरी चल्दैछ?
गुगल एड र अन्य सानोतिनो विज्ञापनले ब्लगको घरखर्च (डोमेन र होस्टिङ) चलाउन पुगेको छ ।
नेपालमा ब्लगिङको भविष्य कस्तो छ?
व्यवसायिक र गुणस्तरीय ब्लग गर्नेहरूका लागि राम्रो सम्भावना देखेको छु । एउटा टिम बनाएर कुनै सवालमा रेगुलर ब्लग गर्यो र स्तरीय सामग्री दियो भने भविष्य राम्रो छ ।
मेरोरिपोर्टमा आकारको पेजः http://meroreport.net/profile/Aakar
आकारको ब्लगः http://aakarpost.com/
ट्विटरमा आकारः @aakarpost
Comment by Dr. Surya B. Parajuli on May 6, 2013 at 9:24pm